Mpanamboatra masinina saron-tarehy masinina - Mpanamboatra masinina maska ​​fitsaboana tarehy
Masinina ao anaty lohan'ny mason-tsofina ao anaty lohan'ny masonao
Masinina mandeha ho azy izy io mba hamokarana ny saron-tarehy, ary ny fanamafisana ny saron-tava amin'ny alàlan'ny ultrasonic. Avy amin'ny famahanana sakafo ho an'ny mason-tarehy ho banga mba hikodiarana ny tadin'ny sofina, ity masinina ity dia mampifangaro masinina banky saron-tava miisa 1 miaraka amina seta 2 ao anaty sofina- milina manome fitoerana amin'ny alàlan'ny rafitra fizarana sarontava, mba hanatsarana ny mandeha ho azy. Olona 2 ihany no ilaina hiasa.
Vidiny: USD75000 / SET
Masinina mandeha ho azy izy io mba hamokarana ny saron-tarehy, ary ny fanamafisana ny saron-tava amin'ny alàlan'ny ultrasonic. Avy amin'ny famahanana sakafo ho an'ny mason-tarehy ho banga mba hamatotra ny tadin'ny sofina, ity milina ity dia mampifangaro masinina banky saron-tava miisa 1 miaraka amina seta 3 ao anaty sofina- milina manome fitoerana amin'ny alàlan'ny rafitra fizarana sarontava, mba hanatsarana ny mandeha ho azy. Olona 2 ihany no ilaina hiasa.
Masinina manao topy masom-baravarana mihidy ivelany
Masinina mandeha ho azy izy io mba hamokarana ny saron-tarehy, ary ny fanamafisana ny saron-tava amin'ny alàlan'ny ultrasonic. Avy amin'ny famahanana sakafo ho an'ny mason-tarehy ho banga mba hikodiarana ny tadin'ny sofina, ity milina ity dia mampifangaro masinina banky saron-tava miisa 1 miaraka amina seta 2 ivelan'ny sofina milina manome fitoerana amin'ny alàlan'ny rafitra fizarana sarontava, mba hanatsarana ny mandeha ho azy. Olona 2 ihany no ilaina hiasa.
Vidiny: USD65000 / SET
Masinina mandeha ho azy izy io mba hamokarana ny saron-tarehy, ary ny fanamafisana ny saron-tava amin'ny alàlan'ny ultrasonic. Avy amin'ny famahanana sakafo ho an'ny mason-tarehy ho banga mba hikodiarana ny tadin'ny sofina, ity masinina ity dia mampifangaro masinina banky saron-tava 1 napetraka miaraka amina talenta 1 any ivelany milina manome fitoerana Ny rafitra detection CCD dia tsy voatery.
Vidiny: USD50000 / SET
Masinina miaro sarimihetsika Medicla tarehy saron-tava
Ity milina ity dia ampiasaina hanamboarana ny sarimihetsika miaro amin'ny sarontava tarehy.
Vidiny: USD18000 / SET
Masinina manao masinina ao anaty sy ivelan'ny sofina Loop Face
Masinina mandeha ho azy izy io mba hamokarana ny saron-tarehy, ary ny fanamafisana ny saron-tava amin'ny alàlan'ny ultrasonic. Avy amin'ny famahanana sakafo ho an'ny mason-tarehy ho banga mba hikodiarana ny tadin'ny sofina, ity masinina ity dia mampifangaro masinina banky saron-tava 1 napetraka miaraka amina talenta 1 any ivelany milina fantsom-boaloboka ary milina 1 napetraka ao anaty masinina tadivavarana. Ny rafitra detection CCD dia tsy voatery.
Vidiny: USD85000 / SET
Masinina fanaovana mason-doha
Ny masinina fehikibo saron-doha dia ny manamboatra ny lafiny roa amin'ny lohan-tsofina PU spandex amin'ny alàlan'ny ultrasonic. Izy io dia manana endrika mampiavaka ny welding mafy sy ny fahombiazany avo.
Masinina manao topy masom-baravarana mihidy ivelany misokatra amin'ny masoko maso miaraka amin'ny detection CCD
Vidiny: USD100000 / SET
Masinina fanamafisam-peo ivelan'ny sofina
Ity milina ity dia tokony hametahana fehin-kibo milanja 3-7 mm eo amin'ny lafiny roa amin'ny saron-tarehy amin'ny banga amin'ny alàlan'ny fantsom-pandrefesana ultrasonic. Mpikirakira 1 ihany no ilaina hametrahana ny saron-tava misavasava amin'ny fehikibo mihetsika tsirairay ary ny masom-bika vita dia hataon'ny milina ho azy. Amin'ny fototr'ilay masinina saron-tava taloha, ity masinina ity dia nampitombo ny tadin'ny sofina ao anaty fonosana.